Hambalyo Waxqabadka Maareeyaha Dekeda Berbera Eng Siciid Xasan Cabdilahi oo Qalab Baahi-weyn loo Qabay Keenay Dekedda Berbera. W/Q Saki Saleeban Xasan
Sunday September 02, 2018 - 03:07:07 in Wararka by Super Admin
Bilihii iyo todobaadyadii lasoo dhaafay, waxan qaybaha Warbaahinta Somaliland ka daalacday guulo waaweyn oo aynu qaran ahaan u gaadhnay, waxana darajadaasi tahay mid dheefteeda aynu wada leenahay.
Waxan Bishii Hore daawaday Taag casriya oo Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi usoo iibisay Dekeda Berbera, kaasoo wata qalabyo dheeraada. Sidoo kale waxan jimcihii Ina dhaafay isna daawaday, warbixin ka hadlaysay Markabkii ugu weynaa Taarikhda Somaliland abid oo kusoo xidhay Dekedda Caalamiga åh ee Berbera. Labadaa qodoba waxan odhan karaa waa guul iyo horumar balaadhan oo aynu wada leenahay, waana taarikh Iyo diiwaan u qormaaya waxqabadka Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi iyo Maareeyaha Dekeda Berbera Eng Siciid Xasan Cabdilahi, oo nasiib u yeeshay.
Maareeyaha Dekeddaha Somaliland, Siciid Xasan Cabdilaahi, waxa uu ku guuleystay inuu dekedda Berbera keeno Taagan cusub oo 3000 oo horse power ah, kaas oo soo jiidaya Markaakiibta xajmigoodu gaadhayso 50000 kun. Markabkii jimcihii kusoo xidhay dekedduna waxa saarnaa 50,000 oo tan badeecad gaadhaysa. Halka Taagii hore ee Dekedda Berbera yaalay uu ahaa 1400 horse power, isla markaana la keenay sanadkii 1976,-kii oo ay keentay dawladii xiligaasi ee Somaliya. Iyadoo aanay Dekedda Berbera kusoo xidhan jirin maraakiibtan xajmigoodu gaadhayo halkan aan sheegnay.